Vatofantsika vatofantsika, Stud Bolt, U-Bolt - Fastener Tailian
Bolt mafana mitafo mafana
Hot atsipazo voanjo nandrisika
Fantsona mafana mihoby
Bolt firafitra vy
Boribory tariby rambony
Tongasoa eto Tailian
Amin'ny maha-vidiny famolahana patio eran-tany an-tokotany dia manolotra ny vokatra tsara indrindra izahay.
Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Distrikan'i Yongnian, Handan City, foibe fizarana faritra lehibe indrindra famokarana faritra any Sina.
Vokatry ny vokatra mihoatra ny 90%
mpitantana mihoatra ny 300
fahaizana famokarana famolavolana isan-taona 50000 taonina
Ny orinasan-tsika dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana: vatofantsika vatofantsika, bolt stud, U-bolt, U-hoop, vy fanamafisam-peo, vy vy, fantsom-bozaka vita amin'ny tavoahangy, fantsom-boaloboka nandrendrika, vy mimanda vy, fanodinam-baravarankely lovia, baomba fitrandrahana, andiam-boanjo, ampahany miendrika manokana, sns.
Bolt torotoro torotoro ho an'ny firafitry ny vy
Bolt hexagon lehibe amin'ny firafiny vy
Vatofotsy miendrika U
Voanjo vy tsy misy vy
Bolt vatofantsika miendrika 9
Bolt vatofantsika miendrika 7
izahay dia mandray akora tsara kalitao avy amin'ny fikosoham-bary lehibe amin'ny orinasam-pamokarana vy lehibe nasionaly, ary miantoka ny kalitaon'ny fitaovana ary mifehy tsara ny kalitao. Ny orinasa dia nandalo fanamarinana fitantanana rafitra kalitao ISO9001.
Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd.dia miorina ao amin'ny Distrikan'i Yongnian, Tanànan'i Handan, ivon-toerana fitsinjarana faritra misy ny fenitra lehibe indrindra ao Shina. Ny orinasa dia manana andiana fanodinana sy famokarana teknolojia feno ho an'ny boloky vatofantsika, fomba fitiliana feno ary teknolojia famokarana mandroso, ary mampihatra ny serivisy amin'ny toetrandro rehetra. Niorina tamin'ny taona 2000, ny orinasa dia manarona faritra mihoatra ny 200 mu ary manana kapitaly voasoratra mitentina 120 tapitrisa yuan.
Ny Elon Musk an'i Tesla dia miresaka momba ny famolavolana tokana sy ny paikadim-panamboarana ny fifandonana
Hebei tailian fastener manufacturing co., Ltd dia voafidy ho iray amin'ireo orinasa tsy miankina 500 malaza ao Shina.
Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. dia niverina niasa am-piandohana
City Hardware International c3-3, Distrikan'i Yongnian, Tanàna Handan, Faritanin'i Hebei, Sina